elavní hair remover အီလန်နီ အမွေးချွတ်
တဗူး ၉၅၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon Professional ဆရာ များရဲ့ ရွေးချယ်မှု!
အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် သွားဖြူပင်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ အသုံးပြုပုံ သွားတိုက်ပါ။ ရေဆေးပါ။ သွားကို သုတ်ပေးပါ။ သွားဖြုပင်ကို သုံးပါ။ ရေဆေးပေးပါ။ အသုံးပြုပုံကို Video လေး ကြည့်ပေးပါ။ ဈေးနှုန်း - ၁သောင်း Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
နှာခမ်းပါးသူများအတွက် နှာခမ်းထူစေမယ့် Miss pomp
နှာခမ်းသား ထူချင်သူများ၊ နှာခမ်းသား ပြည့်ချင်သူမျာအတွက် လွယ်လွယ်ကလေး ပြုလုပ်နိုင်ရန် Rocket မှာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ စွဲစွဲမြဲမြဲ အသုံးပြုမည် ဆိုပါက နှာခမ်းသား ပြည့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့် Lip Pump ကို ပါးစပ်နားကပ်လိုက်ပါ။ Lip Pump အား ငြင်သာစွာ အနောက်ကို ဆွဲပေးပါ။ နှာခမ်းကို အပေါ်ဘက် ပိုထားပေးပါ။ ပထမ နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ တစ်နေ.မှာ နှစ်ခါသာ လုပ်ပေးပါ။ နောက်များမှာတော့ တစ်နေ.ကို သုံးလေးကြိမ် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်လကြာပြီးနောက် အကြိမ်အရေအတွက် ပိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်မိနစ်အထက် ပိုမလုပ်သင့်ပါ။ Miss pomp လေးကို အမြဲ သန်.ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။ အသုံးပြုပြီးတိုင်း သန်.ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။ မှတ်ချက် Miss pomp ကို အသုံးပြုလို. အရမ်းအဆင်မပြေဖြစ်ရင် အသုံးပြုမှုကို ရပ်နားလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - 12000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ပျား+ဆနွန်း+ကော်ဖီ သုံးမျိုး ပေါင်းထားတဲ့ ပျား ဆနွန်း ကော်ဖီ ဆပ်ပြာလေး ကို Rocket online Shopping တွင် ဝယ်လိုက်ပါ။ ယခုတလောလူကြိုက်များပီး ထောက်ခံချက်အပြည့်ဝ ရရှိထားတဲ့ ကော်ဖီ+နနွင်း+ပျား ဆပ်ပြာ တတုံးတဲ့နဲ့တင် ၀က်ခြံ အမာရွတ် အမဲစက်များ သိသာပျောက်ကင်းတဲ့ဆပ်ပြာလေးပါ မူရင်းဈေး တတုံး ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အိမ်အရောက် ပို.ပေးနေပါပြီ။ ဈေးနှုန်း - 3000 kyats ရန်ကုန် မြို.တွင်း =၂ထောင် ကျပ် ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၃ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၄ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၅ထောင်ကျပ် ၅တုံး ဝယ်ရင် Free ပို.ပေးပါတယ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Shoe ထဲမှာ ထည့်စီးပြီး အရပ် ၅cm အထိ မြင့်လာနိုင်မယ့် အရပ်မြင့်ဒေါက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ လိုချင်တဲ့အရပ်ကို မြင့်နိုင်ဖို. ဘူးထဲတွင် ၃ခု ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ် မမြင့်တာကို စိတ်ပူ မနေပါနဲ.တော့ မြင့်ချင်တဲ့အရပ်ကို အရပ်မြင့်ဒေါက်လေးနဲ. မြင့်နိုင်ပြီနော် ဈေးနှုန်း - 15000 Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Hot Bra (အမဲရောင်)
Hot Shaper မှ ထုတ်လုပ်သော Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ပုခုံးလေးနဲ. အလွယ်တကူ ချိတ်လို. ရပြီး ဝမ်းဗိုက် အဆီကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားလုပ်မယ်လို. ဆုံးဖြတ်ထားသူများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Hot ကို ဝတ်ထားခြင်းဖြင့် အဆီများ ကျစေကာ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားလည်း ပြေပြစ် လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း Hot bra = 7000 kyats (အမဲရောင်) Hot Shaper = 12000 kyats ( http://www.rocketonlineshopping.com/2016/10/hot-shapers-and-belt/ ) Hot Belt = 7000 kyats Buy3= 24000 kyats (2000 off) Small – ပေါင် ၇၄ အောက် Medium – ပေါင် ၈၁ အောက် Large – ပေါင် ၈၈ အောက် XL – ပေါင် ၉၆ အောက် XXL - ပေါင် ၁၀၄ အောက် XXXL - ပေါင် ၁၀၄ အထက် ဝယ်ယူလိုပါက ဖုန်းလေး ဆက်ပေးပါ။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping တခြား အလှပ များ ကြည့်ရန် http://www.rocketonlineshopping.com/category/beauty ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Name Card Purse (PreOrder)
Name Card 55 ခုကို အလွယ်တကူ ထည့်နိုင်မယ့် Name Card Purse လေးကို Rocket မှာ မှာယူနိုင်ပါပြီ။ ရရှိနိုင်သော အရောင်များ ပန်း မိုးပြာ အပြာ အစိမ်း ခရမ်းပြာနုရောင် (Lavender) မီးခိုရောင် Item Weight:0.19kg Item Width:8cm Item Length:21cm ၂၀၁၇ ဒီဇိုင်းအသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - 29000 kyats (PreOrder) Delivery free in Yangon PreOrder ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ပတ်စောင့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Lady Summer Flat Shoes (PreOrder)
Code - (LS - 1) Size 34 to 41 ဝတ်သင့်သော အသက်အရွယ် 18 - 40 ရရှိနိုင်သော အရောင်များ အမဲရောင် မီးခိုးရောင် ဝိုင်နီရောင် အပြာရောင် ဈေးနှုန်း - 17000 kyats (PreOrder) April ၃၀ မှာ အော်ဒါ ပိတ်ပါမယ်။ မေလ ၁၅ရက်နေ.မှာ ရပါမယ်။ ရန်ကုန်က ဆိုပါက ပိုက်ဆံကြိုပေးစရာ မလိုပါ။ နယ်က ဆိုရင် ပိုက်ဆံကြိုလွဲ ပေးပါ။ ပို.ခ ရန်ကုန်မြို.တွင်း - ၂ထောင် မြို.ပြင် - ၃ထောင် နယ် - ၅ထောင် (Express ကားခ ပါပြီး) ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
*တစ်နေ့၂စက်မှ၃စက် ချပေးရပါတယ် *ထိပ်တွင်ဆံပင်ပါးခြင်း,ဆံပင်မသန်ခြင်းများကိုထိရောက်စေပါတယ် *ခေါင်းလျော်ရည်ထဲတွင် ၂စက်၃စက်ထည့်လျော်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်အရှည်မြန်ပြီးသန်စွမ်းနက်မှောင်စေပါတယ် #ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့တဲ့ဆံကေသာ သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆံပင်ပေါက်ဆေး/သန်ဆေး #HG9 USA7ရက်အတွင်းသိသာသောရလဒ်ကိုခံစားလိုက်ပါ 1ဘူး _ 22000 ks #ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း 09264686461 HG9 ကို USA မှသဘာဝကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ... Side effect လုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝဆံပင်ပေါက်ဆေးပါ။ (ပစ္စည်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်) ဆံပင်ကျွတ် ၊ ဆံပင်ပါး ၊ ထိပ်ပြောင် ၊ ဆံပင်မသန်သူများ ၊ အပေါက်နှေးသူများ ဆံပင်တွေခဏခဏဆိုးလိုက် ၊ ကောက်လိုက် ၊ ဖြောင့်လိုက်နဲ့ ဆံသားများပျက်စီးကာ နှစ်ခွဖြစ်နေသူများ အားလုံးအတွက်... HG9 လာပါပြီ... Hg9 USA မှာ ဆံပင်ဖြူတွေကို ပြန်နက်စေတဲ့ အာနိသင်လည်း ပါ ပါတယ်နော် HG9 ကသဘာဝသစ်ဥသစ်ဖု၊ဂျင်ဆင်း၊ဂျင်း မှထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စိတ်ချလက်ချ ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လူလတ်ပိုင်းတွေတော်တော်များများမှာ ဆံပင်ကျွတ်တာ ထိပ်ကွက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအတွက် ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့တော့နော်။ HG9 USA ဆံပင်အားဖြည့်ဆေးရည်/ ဆံပင်ပေါက်ဆေးရှိပါတယ်။ ဆံပင်တွေကျွတ်ပြီး ထိပ်ပြောင်နေလို့ အပြင်မထွက်ရဲအောင်ကို စိတ်ညစ်နေတဲ့ Customer လေးတွေအတွက်လည်း HG9 က ဆံပင်များကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီး ဆံပင်များကို ပြန်လည် ပေါက်လာစေပါတယ်။ ဆံပင်တွေဆေးဆိုးထားလို့ ဆံသားတွေပျက်စီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆံသားတွေကျွတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထိပ်ပြောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆံပင်လေးတွေပါးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ညစ်နေတဲ့ Customer လေးတွေအတွက် HG9 ဆိုတဲ့ ဆံပင်ပေါက်ဆေး၊ ဆေးစွမ်းကောင်းလေးကို စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါလို့ လက်တို့လိုက်ပါရစေ။ #အသုံးပြုပုံ ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်း ဆံသားနဲ့ဦးရေပြားကိုလိမ်းရန် တပတ် ၄ကြိမ်ထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ Hair Coat နှင့်ရောစပ်၍လည်း နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၁ပတ်အတွင်း ထူးခြားသိသာမှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ &quot; #How_to_Order &quot; အမည်၊ဖုန်းနေရပ်လိပ်စာ၊မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို #ဖုန်း - 09264686461 သို့ #တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။ နယ်မှမှာယူလိုသူများကို ကားဂိတ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ ငွှေလွှဲပီး ၂ရက်အတွင်းအရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ (တန်ဆာခပါထည့်သွင်းလွှဲပေးရပါမည်) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Ceramic Straightening Bursh
အလွယ်တကူ ဖျောက်စက် Sis တို့အတွက် ပွဲတက်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်သွားခါနီး ဆံနွယ်လေးတွေ ပုံစံတကျဖြောင့်စင်းလှပနေဖို့ အတွက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် တခုလောက်တော့ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ အသုံးဝင်လှတဲ့ straightening brush ဖြောင့်ဘီးလေးတွေပါ မိနစ်ပိုင်းလေးအချိန်ပေးကာ သာမန်ဘီးဖြီးသလိုလေး ဖြီးလိုက်ရုံ နဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကိုဖြောင့်စင်းတောက်ပြောင်လှပသွားစေပါတယ်။ ထိပ်မှာ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပုတီးလုံးလေးတွေပါလို့ ဦးရေပြားအပူလောင်ခြင်း ဆံသား ကျိုးကြေပျက်ဆီးခြင်းဒဏ်တို့မှလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ် ပလပ်ထိုး ခလုတ်ဖွင့်ကာ power နှိပ်ပြီး စက္ကန့် ၃၀လောက် အကြာမှာ လိုအပ်သလို အပူချိန် နဲ့ အသုံးပြုပေးရုံပါဘဲ ဆံပင်အရမ်းထူရင်တော့ အလွှာလိုက်လေးတွေ ခွဲခွဲပြီး ဖြီးပေးရမှာပါ ဖြောင့်စင်းလှပတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေ နဲ့ Style ကျကျ လှပနေဖိုို့ ဝယ်ယူသုံးစွဲကြပါစို့နော် ဈေးနှုန်း - ၃သောင်းကျပ် (အိတ် မပါပါ) Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
မိတ်ကပ်လိမ်းရာတွင် ညီညီ ဖြစ်စေမယ့် စီလီကွန် sponge လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ အသုံးပြုပုံ Sponge ပေါ်မှာ foundation တင် သေသေချာချာ ပွတ်ပေးလိုက်ရင် လှပတဲ့ မျက်နှာလေး ဖြစ်သွားစေမှာပါနော်။ အသုံးပြုပုံလေး ကြည့်ရန် https://www.youtube.com/watch?v=2wSISjkBrDM ဈေးနှုန်း တစ်ခု - ၃၅၀၀ သုံးခု - ၁သောင်း ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ဘက်စုံသုံးဘီး မှန်နဲ. ဘီး ၄မျိုးပါဝင်မဲ့ ဘက်စုံသုံးဘီးလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဈေးနှုန်း - 7000 Kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် ၂ထောင်ကျပ် ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
လက်ဆောင်ပေးဖို. ခေး လက်ကိုင်အိတ်သေးများ
အရောင်လေးငါးမျိုး ရှိပါတယ်။ PU Leather အသားနဲ. ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လက်လေးလုံးခန်. အကျယ်ရှိပြီး ထောင့်ဖြတ် ၅လက်မ အရွယ်အစား ရှိပါတယ်။ Item Type Coin Purses Gender Women Pattern Type Solid Style Fashion Main Material PU Shape Square Item Length 11 cm Closure Type Zipper Material Composition PU Item Width 9.5 cm Item Height 1.5 cm PU leather ဆိုတာ ဘာလည်း https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-PU-leather-and-real-leather ဈေးနှုန်း - ၁၅၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon တခြားမြို.များကို ပို.ခ ၃ထောင် ကျပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3d%3d Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Wonder Hair Steamer
စစ်တို. ဆံကေသာ ပေါင်းတင်ဖို. တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ခေါင်းပေါင်းအိုးလေးကို Rocket တွင် ရရှိနိုင်ပါပြီ။ မီးပလပ်ထိုးပြီး အလွယ်တကူ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - ၁၂၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...